Sunday June 12, 2016 - 14:38:01 in Sawirada is bedbedelaya by Super Admin
amciyadda soheda ayaa gacanta kuheeysa arday gaareysa (1119)arday oo isugu jira agoon iyo danyar isla markaasna kasoo jeeda qooysaska laheeyb sooco ardaydaas ayaa qoysaskooda aan awoodin wax ay ku afuraan bisha ramadaan ee nagu soo food leh. Sidaas
amciyadda soheda ayaa gacanta kuheeysa arday gaareysa (1119)arday oo isugu jira agoon iyo danyar isla markaasna kasoo jeeda qooysaska laheeyb sooco ardaydaas ayaa qoysaskooda aan awoodin wax ay ku afuraan bisha ramadaan ee nagu soo food leh. Sidaas darteed jamciyadda soheda ayaa u diyaargarobeeyso in ay Afuriso (2000) (Labo kun)oo qoys oo isugu jira danyar Agoon Waayeelo, Indhoolayaan iyo Kuwo aan wax dhalin weligood Qoys walbana waxaa kubaxeeysa lacag dhan ($75) doolar waxaana loogu iibinaa (25kiilo oo bariis ah 25kiilo oo bur ah 25kiilo oo sokor ah caag saliid ah Kartoon Baasto ah iyo Gasac caano ah). NB: Umada Soomaliyeed meel walbo oo ay joogaan (Dal iyo Dibad) waxaad maanta dhiibataan ayaa beri idin anfacaaya ku.afuri walaalkaada ($75) si loogu iibiyo wax uu ku afuro sidaas darteed waxaan idinka codsaneeynaa in aad nagala qeeyb qaadataan Afurinta Qoysaskaan walaalahiina ah ee Saboolka ah oo baahan ee aan Awoodin wax ay ku Afuraan. waxaan nagala soo xariiri kartaan Tell : 0612343331 Waxaad wax noogu soo diri kartan EVC Plus Tell: 0612343331 Acco NO Sohedapay role Acco: NO: 30761199 Premier Bank Acc No:030300151001 Salaam Bank Acc No:30283623 Bahabshil Bank Ac No: 31200
amciyadda soheda ayaa gacanta kuheeysa arday gaareysa (1119)arday oo isugu jira agoon iyo danyar isla markaasna kasoo jeeda qooysaska laheeyb sooco ardaydaas ayaa qoysaskooda aan awoodin wax ay ku afuraan bisha ramadaan ee nagu soo food leh.
Sidaas darteed jamciyadda soheda ayaa u diyaargarobeeyso in ay Afuriso (2000) (Labo kun)oo qoys oo isugu jira danyar Agoon Waayeelo, Indhoolayaan iyo Kuwo aan wax dhalin weligood Qoys walbana waxaa kubaxeeysa lacag dhan ($75) doolar waxaana loogu iibinaa
(25kiilo oo bariis ah 25kiilo oo bur ah 25kiilo oo sokor ah caag saliid ah Kartoon Baasto ah iyo Gasac caano ah).
NB: Umada Soomaliyeed meel walbo oo ay joogaan (Dal iyo Dibad) waxaad maanta dhiibataan ayaa beri idin anfacaaya ku.afuri walaalkaada ($75) si loogu iibiyo wax uu ku afuro
sidaas darteed waxaan idinka codsaneeynaa in aad nagala qeeyb qaadataan Afurinta Qoysaskaan walaalahiina ah ee Saboolka ah oo baahan ee aan Awoodin wax ay ku Afuraan.
waxaan nagala soo xariiri kartaan
Tell : 0612343331
Waxaad wax noogu soo diri kartan
EVC Plus Tell: 0612343331
Acco NO Sohedapay role Acco: NO: 30761199
Premier Bank Acc No:030300151001
Salaam Bank Acc No:30283623
Bahabshil Bank Ac No: 31200